Bokin' ny Mpaminany 12 - Wikipedia
Bokin' ny Mpaminany 12
Ny Mpaminany roa ambin'ny folo na Mpaminany 12 na Mpaminany madinika, dia boky na horonam-boky ao amin’ny Tanakh, Baiboly hebreo, izay voasokajy ao amin’ ny Nevi’im aharonim, zana-tsokajin’ ny Nevi’im ("Mpaminany") izay fizaràna faharoa ao amin’ ny Tanakh manaraka ny Torah (fizaràna voalohany "Lalàna") sady arahin’ ny Ketuvim (fizarana fahatelo farany "Soratra"). Atao hoe Trei Assar ("Mpaminany 12") ny fitambaran' izy ireo. Hita ao amin’ ny Baiboly kristiana ireo boky ireo ao amin’ ny zana-tsokajy atao hoe "Mpaminany madinika" izay ao amin’ ny fizaràna fahefatra atao hoe "Bokin' ny mpaminany". Ireto avy ireo boky ireo:
Sefer Hoshea: Bokin' i Hôsea
Sefer Yoel: Bokin' i Jôela
Sefer Amos: Bokin' i Amôsa
Sefer Ovadiyah: Bokin' i Ôbadia
Sefer Yohnah: Bokin' i Jônà
Sefer Mikhah: Bokin' i Mika (na Mikà)
Sefer Nahum: Bokin' i Nahoma
Sefer 'Havakuk: Bokin' i Habakoka
Sefer Tsefaniyah: Bokin' i Zefania (na Sôfônia)
Sefer Haggai: Bokin' i Hagay
Sefer Zekhariyah: Bokin' i Zakaria
Sefer Malakhi: Bokin' i Malakia (na Malaký)
1 Ny Bokin' i Hôsea sy i Hôsea
2 Ny Bokin' i Jôela sy i Jôela
3 Ny Bokin' i Amôsa sy i Amôsa
4 Ny Bokin' i Ôbadia sy i Ôbadia
5 Ny Bokin' i Jônà sy i Jônà
6 Ny Bokin' i Mikà sy i Mikà
7 Ny Bokin' i Nahoma sy i Nahoma
8 Ny Bokin' i Habakoka sy i Habakoka
9 Ny Bokin' i Zefania sy i Zefania
10 Ny Bokin' i Hagay sy i Hagay
11 Ny Bokin' i Zakaria sy i Zakaria
12 Ny Bokin' i Malakia sy i Malakia
13 Jereo koa
Ny Bokin' i Hôsea sy i HôseaHanova
Ny mpaminany Hosea, nataon'i Alessandro Bonvicino, taona 1521-1524.
Ahitana taratra ny tantaram-pivavahan’ ny Fanjakana tany Avaratr' i Israely sy ny fivoaran’ ny jodaisma ny Bokin' i Hôsea na Bokin' i Ôsea. Hentitra ny fomba fitenin’ i Hôsea manoloana ny vahoaka miaina amin’ ny fomba sy fanao izay miseho lany hatrany ho mifanohitra amin’ ny finoana an' i Iahveh sy ny lalàny. Ny hevi-dehiben’ny boky dia ny fitiavan’ i Iahveh ny vahoakany asehon' ny fiainam-panambadian' i Hôsea izay lohahevitra mibahana ao amin' ny boky mitondra ny anarany: lasa tandindon' ny fifandraisana eo amin' Andriamanitra sy ny vahoakany izany. Oharina amin' ny vady tsy mahatoky izany vahoaka izany satria nanompo sampy. Andriamanitra kosa dia aseho ho ilay vady mahatoky sady tokana izay miteny amin' ny fon' ny vahoaka sady manao izay azo atao hamerenana indray izany vady tsy mahatoky izany amin' ny alalan' ny fisedrana azy sady vonona hamela heloka azy raha vao manenina amin' ny anataony izy.
I Hôsea na Ôsea, izay ataon' ny lovantsofina fa nanoratra ny Bokin' i Hôsea, dia mpaminanin' i Israely tao amin' ny Fanjakan' i Samaria, izay velona tamin' ny andron' ny mpanjaka Jerôbôama II (taona 782-753 tal. J.K.). Mpiandry ondry no asany talohan' ny naha mpaminany azy ary vehivavy mpivaro-tena ny vadiny, izay atao hoe Gômera. Tsy afangaro amin' i Hôsea (na Ôsea) mpanjakan' i Israely izy.
Ny Bokin' i Jôela sy i JôelaHanova
Ny mpaminany Joela, sary tamin'ny taojato faha-18.
Mitantara ny fahorian' ireo Jiosy nody ao Jodà avy any am-pahababoana, sy mirakitra ny faminanian' i Jôela (na Jôely) izay mitaona ny vahoaka hibebaka sady mampanantena azy ireo fahasambarana ho avy amin' ny Andron' i Iahveh ny Bokin' i Jôela na Bokin' i Jôely.
Araka ny lovantsofina dia ny mpaminany Jôela (na Jôely) no nanoratra ny boky. Misy anefa ireo mpikaroka milaza fa hafa ny nanao ny toko roa voalohany ary olona hafa ny nanoratra ny toko roa farany. Nefa ny fikarohana amin' izao fotoana izao dia manohana ny maha tokana ny mpanoratra ny boky manontolo.
Ny Bokin' i Amôsa sy i AmôsaHanova
Ny mpaminany Amosa, sary rosiana tamin'ny taonjato faha-18.
Ny Bokin' i Amôsa dia mitsikera ny tsy fisian’ ny fahamarinan’ ny fiarahamonina tao amin’ ny Fanjakan’ i Israely sy maneho ny ho setrin’ izany, dia ny fanamelohana ny fahotan’ i Israely sy i Jodà ary ireo firenana mpifanolo-bodirindrina aminy. Tamin’ ny fotoana nanjakan' i Jerôbôama II (taona 788-747) nampamirapiratra ny Fanjakan’ i Isiraely nefa nisian’ ny fangejana ny mahantra no nanambaràn’ i Amôsa ny hafatr’ Andriamanitra. Mampanantena ny hamerenan' Andriamanitra indray ny fiadanan’ i Israely aorian’ izany ny Bokin' i Amôsa. Nifanandrify amin’ ny nanjakan’ i Ozia (atao hoe koa Azaria na Azariasa) tany amin’ ny Fanjankan’ i Jodà izany.
I Amôsa izay ataon' ny lovantsofina jiosy ho nanoratra ny Bokin' i Amôsa, talohan' ny naha mpaminany azy, dia mpiandry ondry tao amin' ny tanàna kely atao hoe Tekoa, akaikin' i Jerosalema, ao amin' ny Fanjakan' i Jodà tany atsimo izy, nefa naminany tany amin' ny Fanjakan' i Israely tany avaratra izy. Nitsikera ny zavatra nataon' ireo mpanan-karena sy ireo mpihatsaravelatsihy ary ireo mpanompo sampy izy tamin' ny asa faminaniana nataony.
Ny Bokin' i Ôbadia sy i ÔbadiaHanova
Ny mpaminany Obadia, sary rosiana tamin'ny taonjato faha-18.
Mirakitra faminaniana ny amin’ ny hitsaran’ Andriamanitra ny Fanjakan' i Edôma izay harodana sy ny amin’ ny famaliana izay hataon’i Israely amin’io fanjakana io ny Bokin' i Ôbadia na Bokin' i Abdiasa. Hihatra amin’ ny firenena rehetra koa izany fitsarana izany rehefa tonga ny Andron’ i Iahveh.
I Ôbadia na Abdiasa, izay ataon' ny lovantsofina jiosy fa nanoratra ny Bokin' i Ôbadia, dia mpaminanin' i Israely. Nisy fotoana niarovany ny ain' ireo mpaminany hafa miisa 100 izay nenjehin' ny mpanjakavavy Jezebela. Tamin'ny andron' i Jeremia angamba no fotoana nahavelomany ka mety nahita ny fandravana an' i Jerosalema sy ny Tempoly voalohany tokony ho tamin' ny taona 600 tal. J.K. Nanan-karena i Ôbadia nefa nozarainy tamin' ny mpaminany mahantra izany. Nindram-bola misy zanany tamin' i Jôrama zanaky ny mpanjaka Ahaba izy hamelomany an'ireo mpaminany ireo.
Ny Bokin' i Jônà sy i JônàHanova
I Jona sy ilay trozona, nataon'i Pieter Lastman, taona 1621.
Ny Bokin' i Jônà na Bokin' i Jônasa Mitantara ny amin' ny mpaminany Jônà na Jônasa izay nirahin’ Andriamanitra any Ninive (renivohitry ny Asiriana) mba hampibebaka ny mponina tao nefa nitady lalan-kafa tsy ho any. Niteraka fahasahiranana ho azy izany ka nandeha tany Ninive ihany izy amin’ ny farany. Avotra tamin’ ny fahatezeran’ Andriamanitra ny mponina tao rehefa nibebaka. Maneho io boky io fa tsy ho an’ny Jiosy ihany ny famonjena fa ho an’ ny olombelona rehetra.
I Jônà na Jônasa dia mpaminanin'i Iizay heverina araka ny lovantsofina jiosy fa nanoratra ny Bokin' i Jônà na Bokin' i Jônasa.dra fo.
Ny Bokin' i Mikà sy i MikàHanova
Ny mpaminany Mikà
Ny Bokin' i Mikà na Bokin' i Mikea dia mirakitra faminaniana ho an’ i Samaria renivohitry ny Fanjakan’ i Israely sy ho an’i Jerosalema renivohitry ny Fanjakan’ i Jodà, satria tsy nitondra ny fireneny hanompo an’ Andriamanitra ny mpitondra tao fa nanompo andriamani-kafa sady nifetsy sy nangalatra ny fananan’ ny malahelo. Hovalian’ Andriamanitra noho izany i Israely sy i Jodà. Nefa nampanantena Andriamanitra fa amin’ny andro ho avy, ny vahoakan’ i Israely sy ny an’ i Jodà dia hiverina amin’ Andriamanitra ary ny mpanjaka hotendreny (ny Mesia) dia hanao izay hampiadana ny vahoaka sady hitondra fiadanana amin’ ny tany rehetra.
I Mikà na Mika na Mikea dia mpaminany avy any amin'ny tanàna atao hoe Moreseta ao atsimon' ny Fanjakan’ i Jodà, izay niaina tamin’ ny andron' ny mpanjaka Jotama sy Ahaza (na Akaza) ary Hezekia (na Ezekiasa). Nanomboka ny asam-paminaniana izy teo anelanelan' ny taona 737 sy 696 tal. J.K. I Mikà dia niasa amin' ny maha mpaminany azy tao amin' ny Fanjakan' i Jodà talohan' ny famaboana ny tananan' i Samaria tamin' ny taona 722 tal. J.K. sady nanatrika ny fandravana nataon' i Sankeriba ny Fanjakan' i Jodà tamin' ny taona 701 tal. J.K. Sahala amin' i Isaia, i Mikà koa dia nitsikera ireo mpisorona nanan-karena sy ireo manam-pahefana ary ireo mpaminany sandoka izay nahazo ny fahefana sy ny tombontsoa rehetra. Notsikerainy torak' izany koa ny fampiasana ny fivavahana mba hanafenana ny tsy fahamarinana nanjaka teo amin' ny fiaraha-monina.
Ny Bokin' i Nahoma sy i NahomaHanova
Ny mpaminany Nahoma, sary natao tamin'ny taonjato faha-18.
Anambaràn' ny mpaminany Nahoma ny hitsarana sy ny hanamelohana an’ i Ninive renivohitr’ i Asiria (na Asora) noho ny fangejany ireo firenen-kafa ny Bokin' i Nahoma. Fanehoan’ Andriamanitra ny famindram-pony amin’ ny olona ny famaliana ny fahavalony sy ny famotsorany ny vahoakany ho afaka amin’ ny fifehezan’ ny fahavalony. Vitan’ Andriamanitra izany satria izy no mpanapaka ny tany rehetra.
I Nahoma, izay lazain' ny lovantsofina jiosy fa naoratra io boky amin' ny anarany io, dia mpaminany avy ao amin' ny tanàna atao hoe Alkosy izay tsy tena fantatra mazava fa mety ho tany avaratr' i Galilea. Taloha kelin' ny nandravana an’ i Ninive no niasan' i Nahoma amin' ny maha mpaminany azy. Mety naminany tamin' ny fanombohan' ny najakan' i Ahaza (740 tal. J.K.), na manandrify ny antsasany farany amin' ny fotoana nanjakan' i Hezekia (taonjato faha-8 tal. J.K.) i Nahoma.
Ny Bokin' i Habakoka sy i HabakokaHanova
Ny mpaminany Habakoka sy Andriamanitra, sary tamin'ny Baiboly tamin'ny taona 1220 tany ho any.
Ny Bokin' i Habakoka dia mampanantena ireo vahoaka ampijalin' ny firenena mpandresy fa ny fahoriana dia tsy haharitra ary ny marina dia tsy maintsy handresy amin’ ny farany. Araka ny lovantsofina jiosy dia i Habakoka no nanoratra io boky io.
I Habakoka dia mpaminany izay mety nonina tao Jerosalema tamin' ny fotoana nanoratany ny faminaniany. Heverin' ny mpikaroka fa tamion' ny fotoana niakaran' ny herin' ny Kaldeana tamin' ny taona 612 any no naminanian' i Habakoka. Mety niara-potoa-niainana tamin’ i Jeremia sy Zefania izy na taloha kelin' izany.
Ny Bokin' i Zefania sy i ZefaniaHanova
Miteny amin'ny vahoaka i Zefania, sary tao Frantsa, taonjato faha-16.
Ny Bokin' i Zefania na Bokin'i Sôfônia dia maneho ny hadisoan-kevitry ny vahoakan' i Jodà izay nieritreritra fa amin’ ny andro ho avy dia hahatonga azy ireo ho firenana matanjaka Andriamanitra ka ho afaka mandresy ireo fahavalony sy hampanjaka ny fahamarinana sy ny fiadanana. Nanohitra ny fanaon' ny firenena vahiny sy ny fivavahana amin’ ny andriamani-tsy izy ny mpaminany sady nanakiana ny fomba ratsin' ny mpitondra firenena. Tamin'ny fotoana nanjakan' i Amôna sy Manase tao amin' ny Fanjakan' i Jodà mantsy, dia nandroso tao Jerosalema ny fivavahana amin' ireo andriamanitra vahiny, toa an' i Baala sy i Astarte. Araka ny faminanian’ i Zefania anefa dia hosazin’ Andriamanitra ny vahoakan’ i Jodà sy ny firenena rehetra izay tsy nanaja azy. Izany no andro fitsarana, andron’ i Iahveh. Ny hany fomba hahafaka an’ i Jodà dia ny fanajany an’Andriamanitra sy ny fivavahany aminy irery ihany.
I Zefania na Sôfônia dia mpaminany niasa tamin’ ny nanjakan' i Josia tao amin' ny Fanjakan' i Jodà (640-609 tal. J.K.), tamin' ny andron' ny mpaminany Jeremia. Nitoriteny tao Jerosalema izy tamin’ ny taona 640-630 tal. J.K., taloha kelin’ ny fotoana niasan’ i Jeremia. I Josia, ilay mpanjaka nanitsy ny fivavahana, dia nikasa hampijanona izany fanao ratsy izany. Isan' ny nafana fo tamin' ireo mpanolo-tsaina ny amin' ity fanavaozana ity i Zefania.
Ny Bokin' i Hagay sy i HagayHanova
Ny Bokin' i Hagay na Bokin' i Akjea dia mirakitra faminaniana efatra izay ampitain’ i Hagay amin’ i Zôrôbabela, governoran’ ny faritanin’ i Jodà, sy amin’ i Jôsoa mpisorom-be mandritra ny fanamboarana ny Tempoly faharoa tao Jerosalema. Nanao izay hanetsiketsehana ny fahatongavan-tsain’ ireo Jiosy nantsoina taorian’ ny Fahababoana mba hanamboatra indray ny Tempoly ny mpaminany. Satria ny fanamboarana indray ny Tempoly dia nijanona tanatin’ ny valo taona vokatry ny zavatra nataon’ ireo Samaritana. Niezaka izy sy i Zakaria namporisika ny vahoaka ka nanaitra azy ireo hifoha amin’ ny torimasony, sady nitarika azy ireo mba hanararaotra ny fiovan’ ny fitantanan’ ny Persiana tamin’ ny andron’ i Dariôsa I. Nampahatsiahiviny fa ny Tempoly dia tsy hahamasina vahoaka manao asa tsy madio. Naminany izy fa ho rava ny fanjakana persiana aorian’ ny ady an-trano.
I Hagay na Akjea dia mpaminany isan’ ireo nanetsiketsika ny fahatongavan-tsain’ ny Jiosy taorian’ ny Fahababoana mba hanamboatra indray ny Tempoly ao Jerosalema tamin’ ny taona 516 tal. J.K. Tokony ho iray amin’ ireo Jiosy nentin’ i Nebokadnetsara babo tany Babilôna izy. Nonomboka ny asany tokony ho enina taona taorian’ ny fiverenan’ ny Jiosy tao Jodea izy (520 tal. J.K.). Niverina avy tany Babilôna niaraka tamin’ i Zerobabela sy naminany tao Jerosalema tokony ho tamin’ny taona 521-520 tal. J.K. tamin’ ny nanjakan’ i Dariosa I i Hagay. Nitovitovy fotoana nahavelomana tamin’ i Zakaria sy i Malakia i Hagay.
Ny Bokin' i Zakaria sy i ZakariaHanova
Ny mpaminany Zakaria, nataon'i Michelangelo, taona 1508-1512.
Miresaka ny amin’ ny hanamboarana indray ny Tempoly sy hananganana an’i Jerosalema, mba hanomanana ny fiavian’ ny vanim-potoan’ ny Mesia ny Bokin' i Zakaria. Manindry ny amin’ ny tokony handraisan’ ny tsirairay anjara sy hankatoavana an’ Andriamanitra ny boky eto, sady manantitra ny fahitana ny amin’ ny tontolo feno fiadanana izay hiarahan’ ny Jiosy sy ny Jentilisa hivavaka amin’ Andriamanitra. Ny fanamboarana ny Tempoly faharoa no tena nanahirana an’ i Zakaria sady nitoriany ny amin’ ny famerenana indray ny voninahitry ny firenena sy ny fanajana amin’ ny antsipiriany ireo lalàm-pitondran-tena sy ny fahadiovan’ ny fombafombam-pivavahana. Ny fitambaran’ ireo lahatsorara rehetra ireo dia miompana amin’ ny lohahevitry ny fiandrasana ny Mesia.
I Zakaria dia mpaminany naminany tamin' ny andron' i Dariosy I mpanjakan' i Persia manodidina ny taona 520 tal. J.K. izy ary izy no mpaminany faharoa niasa amin' ny maha mpaminany azy taorian' ny fahababoana, nanaraka an' i Hagay (na Akjea) izay niara-belona aminy.
Ny Bokin' i Malakia sy i MalakiaHanova
Ny mpaminany Malakia, nataon' i Duccio di Buoninsegna, taona 1308-1311.
Ny Bokin’ i Malakia dia ahitana ny fampahatsiahivana ny nifidian’ Andriamanitra an’ i Israely, ny fahamasinan’ Andriamanitra, ny tokony hisian' ny fahamarinana ara-piaraha-monina sy hanajana ny fanompoam-pivavahana. Mikasika an’ i Israely ihany ny hafatra eskatokojika ny amin' ny Andron’ i Iahveh dia fa tsy ny firenena rehetra. Miresaka momba ny fanambadiana koa io boky io.
I Malakia na Malaký dia mpaminany israelita tamin’ ny taonjato faha-5 izay heverina, araka ny lovantsofina, fa nanoratra ny Bokin’ i Malakia. Ny lovantsofina sasany anefa manao ny mpanoratra ny Bokin’ i Malakia ho i Ezra (Esdrasa) na i Zorobabela na i Nehemia. I Malakia dia Levita sady isan’ ireo tao amin’ ny "Sinagôga Lehibe". Saika ny mpikaroka rehetra no manaiky fa naminany mandritra ny vanim-potoana persiana i Malakia, sady taorian’ny fananganana sy ny fanokanana ny Tempoly faharoa tamin’ ny taona 516 tal. J.K. Tokony ho niaina sy niasa tamin’ ny fotoan-dry Ezra (Esdrasa) sy i Nehemia i Malakia. Ny mpanonta ny Jewish Encyclopedia tamin’ ny 1906 dia manatsoa-kevitra fa naminany taorian’ i Zakaria sy i Hagay i Malakia.
Bokin' ny Mpanjaka
Bokin' i Ezra sy Nehemia
Bokin' ny Fanjakana
Bokin' ny Tantara
Bokin' i Samoela
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bokin%27_ny_Mpaminany_12&oldid=1041842"
Dernière modification le 18 Desambra 2021, à 23:26
Voaova farany tamin'ny 18 Desambra 2021 amin'ny 23:26 ity pejy ity.